Ukuvocavoca ebusweni ekhaya kusuka ebubini, ngaphambi nangemva kwezithombe - ukuvocavoca no-Elena Kovaleva, Galina Dubinina, Anastasia Burdyug
Indlela yokubukeka eminyakeni eyishumi encane: Ukuzivocavoca ebusweni obuvela ebusweni (abaqeqeshi abahola phambili)
Ukuzivocavoca kobuso (ukwakha ubuso) kuyizivivinyo ezikhethekile ezisiza ukugcina imisipha yobuso ngezwi. Umsunguli walo mshwalense ngumhlinzeki ohlinzayo wePlastiki waseJalimane - Reinhold Benz. Futhi waqhubeka nebhizinisi lakhe u-American Carol Carol Madgio, owavela "ngokuzikhandla kwe-aerobics" ebusweni. Uma unikeza usuku ngalunye imizuzu engu-20-25 yokuqeqeshwa okunjalo, ungavimbela ukuguga, ukuqeda imibimbi kanye nenkibili yesibili. Kukholelwa ukuthi ngokuphumelela kwayo, lezi zivocavoti zingashintsha inqubo ethandwayo yokuhlinzwa epulasitiki - ubuso be-facelift. Futhi asikho isidingo sokugcwalisa ama-fillers ne-botox. Enye kanye namakilasi e-gymnastics ebusweni angalungiswa ekhaya. isayithi yenza ukukhethwa kwabaqeqeshi abaqeqeshiwe kakhulu ekuzivocavoca ubuso - ividiyo enezivivinyo ezivela ku-Elena Kovalenko, uGalina Dubinina no-Anastasia Burdyug kuzokusiza ukuba uhlanganyele ekwakheni ubuso ekhaya.
Ukuvocavoca ebusweni ekhaya - imithetho emihlanu yabanikazi bomzimba
Ngaphambi kokuba uqale ukuqeqesha imisipha yobuso, kudingeka ufunde imithetho emihlanu yegolide yokwakhiwa komzimba. Ngaphandle kwabo, kuyoba nzima ukufeza umphumela oyifunayo.
Iminyaka ekahle yokuqala amakilasi iminyaka engu-25. Ngemuva kweminyaka engama-30 yokuzivocavoca kufanele kube yingxenye yokuqapha ebusweni.
Ukuzivocavoca kufanele kwenziwe njalo nsuku zonke. Kuhle kakhulu ukwenza lokhu ekuseni.
Ku-feysbildinge indima eyinhloko idlalwe ngokujwayelekile kanye namasu asebenzayo. Ngaphambi kokuqala kwamakilasi, khetha inkambo efanele evela kumqeqeshi owaziwayo futhi ulandele imithetho yayo.
Akudingekile kusukela ezinsukwini zokuqala ukunikeza ukwanda okukhulu emisipha yobuso. Kungcono ukuhamba kancane kancane kusuka emancinjini kuya kumthamo omkhulu wokuzivocavoca.
Ukuvocavoca kobuso kufanele kuhlanzeke. Isikhumba ngaphambi kokuqeqesha kumele kuhlanjululwe nge-tonic elula.
Umphumela wokuqeqeshwa ngeke ubonakale ngemva kweseshini yokuqala. I-contour of the face izomiswa emva kwezinsuku ezingu-15-20 zokuqeqesha nsuku zonke. Ama-wrinkles azoqala ukunyamalala kungakapheli izinyanga ezingu-2-3 kamuva. Khona-ke ubuso buyothola umbala omuhle nombukiso onempilo, futhi izihlathi zizoqina ngokwengeziwe.
Izindlu zokuzivocavoca zasekhaya zobuso obunzima, noma Indlela yokubukeka engu-50 ku-35, isithombe ngaphambi nangemva kokwakha
Sekuyisikhathi eside kuboniswe umphumela onamandla wokuguga, owenza ukuvivinya umzimba. Amasu amaningi anti-yobudala asethuthukile. Ukuzivocavoca okunjalo okuvuselelayo kwenziwa ngezinyathelo. Izingxenye ezihlukahlukene zobuso kancane kancane zifudumala futhi zilethwe nge-tonus. Sebenzisa ithebula lethu lesithombe njengento yokusiza ukwakha ubuso obuphumelelayo.
Amajwabu amehlo. Iminwe yenkomba ivule endaweni yeshiya. Ezinkulu zifakwe emaphethelweni angaphandle. Uthola ngendlela yezibuko. Amajwabu amehlo adinga ukuvalwa ngokuqinile. Khona-ke iminwe yezinkomba phakathi kwamashiya iya phezulu. Amakhulu abuye abuye phezulu, kodwa ekuqondeni ezindlebeni. Ukuzivocavoca kufanele kwenziwe cishe imizuzwana engu-40.
Umphumela: izindawo zokuvuvukala endaweni yamezi ziyanyamalala, i-tonus yama-eyelidi angenhla nephansi ayenyuleka, isikhumba sivuselela, kanye nezibonakaliso zokukhathala kweso zisusiwe.
Abafowenu. Izithupha zibeke ngaphansi kwama-cheekbones. Eminwe iminwe yokuphumula yesundu isenhla ngaphezu kwebheji eliphezulu lamashiya. Amashiya kudingeka aphakanyiswe phezulu, futhi iminwe yehle phansi, yenza ukumelana. Lesi sikhundla sinqunywe imizuzwana engu-30, bese izimpande zobuso ziphumula.
Umphumela: i-prophylaxis esebenzayo ngokumelene nemibono ebunzini, imibimbi eguquguqukayo emkhatsini wezinhlobonhlobo nemifumba yesikhathi eside ilahleka, ukunqwabelana kwamajwabu angenhla kuqedwa.
Amajwabu angaphansi. Iminwe yenkomba ifakwa ngaphansi kwamajwabu angaphansi, emgqeni omkhulu we-eyelashes. Khona-ke kudingeka udonsa ngokugqamile futhi ubheke phezulu ngangokunokwenzeka. Ubuso buke phambili, futhi amahlombe abuyele emuva. Kufanele kube nokuphikiswa. Bamba kule ndawo ngamasekhondi angu-30.
Umphumela: Imibuthano emnyama kanye nezikhwama ngaphansi kwamehlo ziyanyamalala kancane kancane.
Amahlathi. Iminwe yenkomba icindezelwa ngokumelene nengxenye ehamba phambili yamahlathi emaphakathi. Izindebe zicindezeleke kakhulu emazinyo. Manje kudingeka sikhombise ukuphazamiseka "Fu!" - ncamashi esishoyo uma kukhona okungajabulisi okushiwo. Udinga ukumamatheka, kodwa kuphela engxenyeni ephakathi kwezindebe, uzama ukuwavala. Iminwe kufanele izwe ukuhamba kwezihlathi. Yenza izikhathi ezifanayo ezingu-20.
Umphumela uqinile, izihlathi.
Ikhala. Ikhala limbozwe eduze nesikhumbuzo nesithupha. Ngomunwe wenkomba wesandla sesibili, iphuzu lekhasi liphakama. I-lip engenhla kufanele ikhishwe futhi ibanjwe imizuzwana embalwa. Ukwenza ukuvocavoca kwempumu izikhathi ezingu-40.
Umphumela: impumu ihlala ithoni, ayikhuphuki ngenxa yokuguga (iqiniso lokuthi ikhala liyakhula yonke impilo - into efakazelwe isikhathi eside).
Amakamelo ezindebe. Imilomo iluma ngokuqinile, idonsela ngaphakathi. Ngeminwe yakho yenkomba, udinga ukusikhipha isikhumba phezulu nangaphansi, hhayi ukuwaphuca emaceleni ezindebe zakho. Ukusilalisa imizuzwana engu-40. Khona-ke, cishe ngaphandle kokuvula izindebe zakho, phuma emoyeni uphinde ukhululeke imisipha yakho.
Umphumela: Esinye sezibonakaliso ezicacile zeminyaka - izingxenyana zezindebe, ngokudabukisayo ziqondiswe phansi. Lesi siphambeko sivinjelwa kalula futhi sichithwa ngokwenza lo msebenzi olula.
Umqulu wezindebe. Ngeminwe yakho yezinkomba, phonsa umphetho wangaphandle we-lip ngaphansi komlomo wangaphakathi. Iminwe ukulungisa i-lip "elisontekile" phakathi nendawo bese uyicindezela ngokufanele emaceleni omabili.
Umphumela: izindebe ziba namandla, ezithambile nezokunwebeka ngaphandle kokusetshenziswa kwezigcwalisi ezikhethekile.
Izinhlanzi ze-Nasolabial. Izindebe zicindezelwa ngokuqinile ngangokunokwenzeka ezinsizeni futhi zivuleke ngesimo se-oval noma "O". Ukukhomba iminwe kusetshenziswe emagumbini ezindebe. Khona-ke iminwe iyakhuphukela emaphikweni emphunjini bese iwalela ngokulandelana. I-reference point iyisihluthulelo se-nasolabial.
Umphumela: ukususwa ngisho nama-deep creases phakathi kwekhala nezindebe.
Ukuncintisana kobuso. Umlomo uvula, izindebe ezansi nezingaphezulu zicindezelwe ngokumelene namazinyo futhi zihlanganiswe ngaphakathi. Kulesi sikhundla, udinga ukuvula kancane futhi uvale umhlathi emihlanu. Khona-ke, ukugcina umlomo wakho uvaliwe, uphakamise isikhumba sakho kancane. Yilungiselele imizuzwana embalwa kule ndawo, phumula imisipha.
Umphumela: ukucacisa okwesibhakabhaka se-oval face emgqeni womhlathi, ukukhipha i-chin double.
Umkhuhlane nesinki. Esinye isandla sokufaka entanyeni bese ucindezela kancane, esinye sithembele odongeni. Phakamisa ikhanda lakho uphakamise. Ngemuva kwaloko, ulimi luzofinyelela endlebeni yempumu bese luqhuma kude nodonga. Phinda ukunyakaza izikhathi ezingu-30, ugcine konke endaweni efanayo. Yenza umsebenzi izikhathi ezingu-30, uphendulele ikhanda ngakwesobunxele futhi izikhathi ezingu-30 ngakwesokudla.
Umphumela: umjikelezo wesikhuhlane, umhlathi, intamo iboshelwe futhi insizwa yesibili iphela. Izithombe ngaphambi nangemva kokwakha zokwakha zingenza ngisho nalabo abaphikisana nabangaboni kakhulu ukuthi ukubhekana nesakhiwo akuyona ukuchitha isikhathi, kodwa ukuvivinya umzimba okuphumelelayo nokuvuselela ubuso.
Ukuzivocavoca kubhekene no-Anastasia Burdyug - ukuvivinya umzimba okungama-13 ngokumelene nemibimbi
Zonke lezi zindlela zokwakhiwa komzimba zihlinzekwa ekuqeqeshweni ngu-Anastasia Burdyug. Wabiza isifundo "Super Face". Ihlanganisa umzimba wama-13. Ngesikhathi bathatha imizuzu engu-8 kuphela kabili ngosuku. Ngenxa yalokho - imizuzu engu-16, okuzokwenza ubuso bakho bubusha, buhle futhi bufanele.
Ezinyangeni ezingu-2-3 inqubo evuselela kakhulu yokuvuselela izotholakala, noma kunalokho - ebusweni. Ama-wrinkles azoqala ukunyamalala, isikhumba sobuso nentamo kuyoba bushelelezi, ngaphandle kwemibimbi, umjikelezo wobuso uzoqina. Amehlo, izindebe, umugqa we-cheekbones uzoba okucacile kakhulu, izimpawu ze-couperose ziyophela. Kuvidiyo evela ku-Anastasia Burdyug - imiyalelo eningiliziwe yokuthi ungayenza kanjani kahle ukubhekana nokuguga kwezemidlalo yokuguga.
Ukuzivocavoca kobuso no-Elena Kovaleva - ukuvivinya umzimba
Intsha engaphandle kwesikhathi - isisusa esinjalo esibangela omunye umqeqeshi owaziwayo ebusweni bokuzivocavoca u-Elena Kovaleva. Umsebenzi womethuli we-TV wamdinga ukuba abe nokubukeka okuhle. Ngolunye usuku intombazane yayithathwe yi-yoga ebusweni. Wachitha isikhathi esiningi nomzamo wokutadisha izisekelo zokuzivocavoca ebusweni. Manje u-Elena ungumbhali wezinhlelo zakhe zokuvuselela ubuso ngosizo lokwakha ubuso. Umqeqeshi uvame ukuqhuba ukuqeqeshwa okuvulekile, lapho ekhuluma khona ngezinselele zekhono lakhe.
Vula ukuqeqeshwa no-Elena Kovaleva
Ukuzivocavoca kobuso noGalina Dubinina - inguqulo yevidiyo ephelele yesifundo
Umqeqeshi wezempilo owaziwayo uGalina Dubinina uye wahlanganyela ekuzivocavoca iminyaka engaphezu kwengu-12. UGalina ungumqeqeshi ohlangene nolwazi lomzimba, umhleli we "School of Youth" wakhe. Umgomo wayo ukulwa nobudala, ukuvuselela umzimba nokubhekana nokuqeqesha, ukuvimbela izinkinga zempilo ezihlobene nobudala. Inguqulo egcwele yevidiyo yokwakhiwa kobuciko noGalina Dubinina izokusiza ukuthi uqonde ukuthi ukufaneleka komuntu, kanjani ukuhlela ukuqeqeshwa kahle futhi kubonakale kulungile futhi kuhlanzekile noma kunini. Izindlela zokwakha ezibucayi zande. Bathuthukiswa abaqeqeshi abawaziwayo, futhi bathandwa kakhulu phakathi kwabo bonke abafuna ukugcina ubusha nokuhlanzeka kwesikhumba sabo. Kuyinto elula kakhulu - imishini yokuzivocavoca emaminithi angu-20 ebusweni futhi akukho botox.
Indlela yokusiza umzimba obuthakathaka
Roll nge inkukhu ekhaya
I-Jamaican inkukhu isaladi
Umphumela wokuhleka kwezempilo